Somali daily News – Magaalada Muqdisho Oo Ku Soo Badanayaa Dilalka Qorsheysan Oo Loo Geysto Ergooyinka Soo Doortay Xildhibaanada Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare.
Kooxo hubeesan ayaa xalay xaafada Siliga Ameerikaanka ee magaalada Muqsdisho waxa ay ku dileen haweeney la sheegay in ay kamid aheed Ergooyinkii wax kasoo doortay Xildhibaanada Aqalka hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Goob joogayaal ayaa ku waramay in labo nin oo bistoolado ku hubeesnaa dil qorsheesan ugu geesteen Xaafada Siliga Ameerikaanka hooyo lagu magacaabayay Haajira Cabdi oo la sheegay in ay kamid aheed Ergadii Xildhibaanada kusoo doortay magaalada Baydhabo.
Kooxihii dilka geestay ayaa la sheegay in goobta si deg deg ah uga baxsadeen, waxaana dilka kadib halkaasi gaaray ciidamo katirsan dowlada Soomaaliya, kuwaa oon ku guuleesan in ay gacanta kusoo dhigaan ragii dilka ka danbeeyay.
Haweeneydan xalay la dilay Haajira Cabdi ayaa la sheegay in ay aheed hooyo heesata labo caruur ah, waxaana dilka loo geestay si weyn uga naxay eheladeeda iyo dadkii ay dariska ahaayeen.
Dilalkaani qorysheysan ayaa waxay imaanayaan xilli ay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho in dilal qorsheysan oo noocaani oo kala loo geystay ergooyin iyo odayaal oo lagu dilay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho.